Akwụkwọ nka - Crafts On | Crafts On (Peeji nke 2)
Daybọchị ọmụmụ achicha inye onyinye
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme igbe onyinye, nke a bụ nke dị mfe n'ụdị achịcha ụbọchị ọmụmụ. Na…
Site na ọkpọ kaadiboodu buru ibu anyị nwere ike weghachite ọdịdị ya iji mee mkpara mmiri ozuzo. Emere ya site na iji ihe di mfe ma nweta ya.
Mfe Kaadị Stock Ladybug
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị na-aga n'ihu na ọrụ aka nke na-anọchite n'oge opupu ihe ubi. N'okwu a, ka ...
Ndewo onye obula! N'ime oru nke taa anyi ga eme nkpuru ahihia, osisi okooko osisi na ...
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa, anyị ga - ahụ etu esi eji drapọ nke kaadiboodu mee dragon ...
Peacock na kaadiboodu
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga - ahụ otu esi eme igwe a n'ụzọ dị mfe yana ...
Easy akwụkwọ onye ofufe
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ etu esi eme akwụkwọ nkwado akwụkwọ a, ọ dị mfe ...
Ewute na kaadị mmiri
Anyị emeela kaadị dị iche na iche iche ka ị nwee ike ịkele ma ọ bụ zipụ ozi nzuzo na onye ọ bụla masịrị gị.
Origami anụmanụ na-eche ihu, zuru oke ịmalite ịme ọnụ ọgụgụ
Ndewo onye obula! N'isiokwu nke taa, anyị ga-egosi gị otu esi eme ụfọdụ ọgụgụ origami dị mfe. Na…
Ifuru ngwa ngwa na cardstock
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ etu esi eme ụdị ifuru a, na ...
Origami Elephant Ihu
Ndewo onye obula! Anyị na-aga n'ihu na usoro nke origami dị mfe, ụzọ na-atọ ụtọ iji soro ezinụlọ na-eri oge ehihie, na ...
Mgbape origami dị mfe
Ndewo onye obula! Na nka anyi taa, anyi g’eme onyonyo ozo dikwa mfe. Oge a anyị na-aga ...
Ndewo onye obula! N'ime oru taa anyi ga - aga n'ihu n'usoro onyonyo origami di nfe. Na…
Ndewo onye obula! Na nka nke taa anyi gha hu ka esi eme onu ogugu ozo. Anyị ga-eme ...
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ ọhụụ a, anyị ga - eme ihe ọzọ maka ọnụ ọgụgụ origami dị mfe site na usoro ...
Mfe Origami Na Na Na
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ a, anyị ga-ewetara gị ụdị ọhụụ ọhụụ dị mfe site na usoro anụmanụ nke ...
Ndewo onye obula! Na nka nke taa, anyi n’eme kaadiboodu mara nma n’ime kaadiboodu na akwukwọ crepe. Ọ bụ…
Mfe Origami Fox Ihu
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga - eme nke atọ mfe origami na usoro ...
Ndewo onye obula! Na nka nke taa anyi n’aga n’iru n’usoro oru uzo origami. Anyị na-aga…
Ndewo onye obula! N'ime oru ugbua anyi ga - ebido usoro onu ogugu ime Origami ...
Egwuregwu iji mụta nọmba
Anyị nwere sọọsọ kaadiboodu na-atọ ọchị. A na-arụ ụdị ọrụ a ka ụmụaka wee nwee ike ...
Mgbụsị akwụkwọ epupụta
Akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ ndị a bụ ọrụ dị mfe ma na-atọ ụtọ iji chọọ mma yana ọbụlagodi obere ụlọ nwere ike isonye.
Ibe edokwubara maka akwukwo
Ọ bụrụ n’ịchọ ịgụ na ịka akara na peeji gị, ị nwere ike ịme ibe edokọbara nke kaktus. Ha nwere udi obi uto nye akwukwo gi
Igbe na ihe ijuanya inye
Obere igbe ndị a nwere ihe ịtụnanya nwere amara ha na nke ahụ bụ na ị nwere ike ịme onwe gị. Ndidi ị ga - enweta ihe ncheta nke ga - atọ gị ụtọ!
Ifuru iji mmiri ma ọ bụ ifuru ụyọkọ
Ndewo onye obula! N'ime oru nke taa anyi ga ahu ka esi eme ifuru eji mmanu ma obu ifuru ...
Rockrọ rọketi na kaadiboodu ọkpọ
Tinyegharịa oge gị site na iji mpempe akwụkwọ kaadiboodu mee ka ọ bụrụ rọketi ohere izizi. A nka ị pụrụ ime na ụmụaka.
Ozi nzuzo iji kpọọ nledo
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ etu esi ede ozi nzuzo ka igwu egwu ...
Mụta ịkpa ákwà na azụ kaadiboodu
Ndewo onye obula! N'ime nka taa anyi g'eme ka azu kaadiboodu nke zuru oke imuta otu esi esi ...
Ndewo onye obula! N'ime nka taa anyi g'eme ka kaadiboodu eju nke zuru oke iji ...
Igbe yiri nke Unicorn
Mụta otu esi eme igbe ị nwere ike imegharị ma gbanwee ya ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya n'ụdị unicorn. Ọ bụ ihe ọchị na nke mbụ.
Anumanu isii iji kaadiboodu ma obu akwukwo mposi
Ndewo onye obula! Dika anyi siri kwuputa, anyi wetaara gi umu aka a umu anumanu isii bu kaadiboodu ma obu akwukwo mposi.
Ji achọ bọl na china akwụkwọ
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eji bọọlụ china chọọ bọọlụ eji achọ mma. O zuru oke icho mma ...
Okirikiri akwukwo na-eme ka umuaka
Echefula na nnukwu ọrụ a dị mfe ịme ụmụaka. Ha ga-enwe ihe ha nwere iji gabiga oge okpomọkụ!
Ndewo onye obula! N'ime oru taa anyi wetara gị otu ị ga - esi mee kaadiboodu kaadi ọchị a dị mfe ...
Igbe mkpụrụ osisi
Igbe ndị a mara mma, obere na nke mbụ. Emere m igbe abụọ yiri mkpụrụ osisi n'ụzọ dị mfe ...
Kaadị ekele maka ụbọchị nne
Ndewo onye obula! N’ọrụ nka a, anyị wetaara gị ezigbo kaadị ekele maka nke ụbọchị ...
Cardboard minion, zuru oke iji mee ya na umuaka #yomequedoencasa
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eji kaadiboodu mepụta minion, ọ zuru oke iji ...
Akpa akpa ọchị iji kechie onyinye #yomequedoencasa
Ndewo onye obula! Taa nka anyị ga-eme akpa ọchị a iji kechie onyinye. O zuru oke maka ...
Mee akpa akwụkwọ iji chekwaa ihe ma ọ bụ nye dị ka onyinye
Ndewo onye obula! N’ime ọrụ nka anyị ga - ahụ otu esi eme akpa akwụkwọ iji chekwaa ihe ma ọ bụ nyefee….
Nwanne Ista #yomequedoencasa
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ a anyị ga-eme Nwanna Izu ụka a, ọ bụ ọrụ dị mfe onye nzọụkwụ ya ...
Bookmụnna Ibe edokọbara #yomequedoencasa
Ndewo onye obula! Taa, anyị ga-eme ọmarịcha nzukọ ụmụnna a. Anyị nọ na Ista, n'agbanyeghịkwa ...
3D obi iji soro ụmụaka mee ma tinye na windo #yomequedoencasa
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga - egosi gị otu esi eme obi 3D zuru oke iji tinye ...
Nna Day kaadị nke aka na obi
Nna Day na-eru nso na ọ bụ ya mere na anyị chọrọ ịkọrọ gị nke a dị mfe nka nke aka na obi nke ịhụnanya.
Akwụkwọ kaktus ịchekwa swiiti
N'ime nka taa, anyi g'eme kactus di nma nke kaadiboodu ya na agba ya. Ha bụ ndị mbụ na ...
Kaadị ikele ụbọchị nna
Ndewo onye obula! N'ime izu ole na ole, Father'sbọchị Nna ga-abịarute na ọ bụ ya mere na ọrụ a anyị ji aga ...
Acha agba agba iji mee ụmụaka
Echefula na ọrụ a dị mfe isoro ụmụaka. Ọ bụ maka ịme agbụ nwere akwụkwọ nwere agba wee sikwaa chọọ ụlọ gị mma.
Kpuchie akwụkwọ na mpempe akwụkwọ dọwara adọwa ma ọ bụ nke na-adịghị anyị mma
Ndewo onye obula! N'ime oru nke taa, anyị ga-egosi otu esi ekpuchi akwụkwọ nke dọwara mkpuchi, ...
Obi na post-ya
Obi a na post-ya dị mma iji ju onye pụrụ iche anya. Onye ị họọrọ ma chọọ ga-anụ ụtọ ọmarịcha nkọwa a nke ukwuu.
Mfe mosiaco na akwukwo iji mee umuaka
Mozis a akwụkwọ dị mfe iji soro ụmụaka mee ihe dị mma maka isoro obere ụmụaka rụọ ọrụ site na iji mkpa na ezigbo ngagharị.
Origami nwere kpakpando mebere
Origami bụ ụzọ na-atọ ụtọ nke ukwuu iji mụta ịme atụmatụ na ịmeghachi ọtụtụ atụmatụ na ọnụ ọgụgụ, site na nka a anyị ga-eme kpakpando mebere.
Mfe ime onyinye ụta
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eme ụta onyinye a na-ahụkarị n'ụzọ dị mfe ...
Ihu na ozi
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eche ihu na ozi inye ozi, kelee ...
Akwụkwọ yinye na ụmụ
Ọrụ a bụ kpochapụwo mana ọ dị mma icheta ya n'ihi etu o si dị mfe yana n'ihi na ụmụaka nwere ike ịme ya ...
Kaadị maka ụbọchị ịhụnanya nwere akwụkwọ nwere agba
Kaadị a nke acha akwụkwọ dị mma inye n’ụbọchị Valentine. Ọ dị mfe ịme na onye natara ya ga-enwe nnukwu ọ happyụ.
Akwụkwọ ifuru maka onyinye pụrụ iche
Ifuru akwụkwọ a bụ ezigbo onyinye maka onye pụrụ iche. Nke kachasị mma, ọ bụ ọrụ dị mfe ịme.
Ibe edokọbara akwụkwọ ọchị
Echefula na ọrụ a na-atọ ụtọ maka ndị hụrụ akwụkwọ n'anya; a fun na okike ibe edokwubara.
Santa Claus okpu maka ndị ọzọ
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eme okpu Santa zuru oke ka anyị tinye n'ime ...
Santa okpuru edokọbara
Ndewo onye obula! Na nka anyi taa g’eme ka edokwute okpu Santa Claus. Ọ dị mfe…
Ihe ịchọ mma Star maka ekeresimesi
Ihe nka a di nfe ma dikwa nfe bu ezigbo ihe nlere ekeresimesi nke umuaka kwesiri ime ma dozie ulo nke aka ha.
Origami maka akwụkwọ mposi akwụkwọ mpịakọta 2
Ndewo onye obula! N'ime ọrụ taa anyị ga-eme origami maka akwụkwọ mposi maka ịtụnanya ...
Bat na-atọ ọchị iji mee ụmụaka na Halloween
Ndewo onye obula! Ememme Halloween na-eru nso maka nke a, na nka a anyị na-ewetara gị otu esi eme ụgbụ ...
Kaadị ekele mkpanaka
Nnọọ! N'ime ọrụ a, anyị ga-eme kaadị ekele mkpanaka. Ọ bụ ihe mbụ kaadị na mmewere na ...
Igwe ojii nwere agba tụlee
Cloudgwé ojii na-acha tụlee dị mma ka icho mma na, na nke a nka ị pụrụ ime ka ya na ụmụ gị na-enwe ha na-enwe.
Origami maka akwụkwọ mposi
N’ọrụ nka taa anyị ga - eme ụdị Origami atọ maka aha akwụkwọ mposi. Formsdị…
Nice agba akwụkwọ cat
Echefula ọrụ a dị mfe iji mee akwụkwọ pusi nwere agba na akwụkwọ, ọ dị mma iji chọọ ụlọ gị mma! Willmụaka ga-ahụ ya n'anya!
Chepụta mkpirisi urukurubụba gị
Originalzọ mbụ iji mee scrapbooking akwụkwọ butterflies na usoro origami. Anyị ga-edebe ha dị ka ụdị ịchọ mma na ekwentị mkpanaaka.
Aka kaadị maka mama ma ọ bụ papa
Kaadị aka a dị mma iji nye nne ma ọ bụ nna onyinye, n'ihi na ihe ọ pụtara ga-eru n'obi onye ọ bụla natara ya.
Nha ezé ka edee eze nwa n’abalị
Nke a Tooth Fairy craft dị mma maka ụmụaka ka ha debe ma ọ bụ zoo ezé nwa ha n'abalị na oke ga-agbanwe ya maka mkpụrụ ego.
Echiche iji mee onyinye mbụ
Nwere ike ịchọpụta ụzọ anọ mbụ iji kechie onyinye maka mmemme pụrụ iche na nke ahaziri iche. Echepụtawo m onyinye iji nwee ike ...
Kaadị ekele mbụ
N’ọrụ nka a anyị ga - eme kaadi ekele izizi iji nye onye ọ bụla ịchọrọ. You chọrọ ịhụ ka ...
Garland nke obi zuru oke icho mma ime ụlọ ma ọ bụ maka oriri
N'ime nka a anyị ga-eme okpu nke obi iji chọọ ụlọ mma ma ọ bụ chọọ oriri. Dị very
Chinchi na-agba ọsọ. Anyị na-eme egwuregwu maka ụmụaka
Ka anyị na-echigharịkwuru ndị n'oge okpomọkụ ụbọchị nke ahụ nwere ike iyi ihe na-agwụ ike site na-eme nka iji mee ka agbụrụ ebe….
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ zuru oke maka ịchọ mma oriri ma ọ bụ etiti
Mgbe oge ọkọchị rutere, anyị chọrọ iji agba agba chọọ ndị ọzọ mma, maka nke a, anyị ga-eme ọmarịcha ihe ...
Mara mma dandelions kaadị
Echefula na kaadị dandelion a dị mfe. Ọ dị mfe ịme na ezigbo iji nye onye pụrụ iche.
Ji achọ nnukwu daisy nwere agba akwụkwọ
Nka nka di nfe ma inwere ike meputa nnukwu daisy icho mma ma obu nye onye puru iche. Aremụaka ga-ahụ ya n'anya!
Na-efe efe butterflies nke akwụkwọ agba
Akwụkwọ butterflies dị mfe iji mee ka ọ dị ukwuu maka ịme nkuku nwata ọ bụla, ị ga-ahụ ọrụ a dị mfe!
Painiapulu okpu ọma icho mma ke ndaeyo
Pineapple garlands bụ ezigbo nhọrọ mgbe niile iji chọọ oriri ma ọ bụ ụlọ egwuregwu ... na ndị ọzọ mgbe oge okpomọkụ ruru!
Echiche maka ịme nọmba ụbọchị ọmụmụ maka achịcha
Ike gwụrụ nke ụdị nọmba kandụl maka achịcha? Anyị na-enye gị echiche ịme nọmba ọnụọgụ ụbọchị, nke ...
Otu esi eme ifuru akwukwo nkpuru osisi nwere mkpuru ahihia
Otu esi eme ifuru mbụ ya na akwụkwọ crepe ya na petals pumped, ezigbo maka ịchọ mma na onyinye. Mfe na ngwa ngwa nka ime.
Have nwere ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ihe omume ma chọọ inye ego mana ọ bụghị naanị inyefe ya? N'ime ọrụ a, anyị ga-ahụ ụzọ mbụ iji nye onyinye you nwere ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ ihe omume ma chọọ ịnye ego mana ọ bụghị naanị inyefe ya? Ka anyị hụ ụzọ mbụ iji mee ya.
Etiti etiti na okooko osisi, nkume na kandụl
N’ime ọrụ aka a, anyị ga-eme ihe dị mkpa maka ụlọ anyị iji were akwa ihu igwe. Gaa…
Easy crepe akwụkwọ lotus ifuru
Anyị ga-eme ifuru lotus na akwụkwọ crepe, nke zuru oke maka ịchọ ụlọ ahụ mma. Enwere ike eyi ya naanị, maka ...
Akwukwo kaadiboodu azu ahia, odi nma ime ka umuaka mee
Anyị ga-arụ ọrụ zuru oke iji mee ụmụaka na ụlọ ha ga-eji egwu ...
Crafts maka inepo Day. Shaker February 14
Enwere obere ihe iji mee ememme ụbọchị Valentine ma ọ bụ ụbọchị ịhụnanya na ọbụbụenyi na post a, m ga-akụziri gị otu esi eme kaadị shaker a iji nye ya Mụta otu esi eme nke a kaadị shaker maka ụbọchị Valentine, ọ dị mma iji nye ya onye puru iche iji mee ememe ubochi nke ihunanya na enyi.
Jiri mpempe akwụkwọ iberibe gị chọọ akwụkwọ ndetu nke gị mma
Taa ka m bịara ịtụ aro ihe: chọọ akwụkwọ ndetu gị akwụkwọ scrap. Ọ bụ ihe dị mfe na ...
Anyị na-eme akwụkwọ foto na-emegharị akwụkwọ mkpofu site na ọrụ ndị ọzọ
Taa, anyị na-eme foto foto iji weghachite akwụkwọ mkpofu site na ọrụ ndị ọzọ. O doro anya na ọ bụrụ na ị wepụ, ị ga -
Dị mfe akwụkwọ okooko osisi icho mma gị crafts
Akwụkwọ okooko osisi bụ otu n'ime ọrụ nka a na-ejikarị arụ ọrụ niile dị ka ihe ịchọ mma oriri, ụbọchị ọmụmụ, mmiri, wdg ... Na Mụta otu esi eme okooko osisi ndị a na nkeji 5, zuru oke iji chọọ oriri ọ bụla ma ọ bụ ememe ọ bụla ma nye ya ezigbo aka.
Otu esi eme okooko osisi na okirikiri
Mụta otu esi eme okooko osisi ndị a zuru oke maka ọrụ aka gị na ọrụ ị na-ede akwụkwọ yana naanị akwụkwọ gburugburu.
Otu esi eme ka mkpado mgbasa ozi mekọrịta
Na ederede taa ị ga - ahụ otu esi eme ka mkpado mgbasa ozi mee ka ọ bụrụ ihe masịrị gị: kaadị onyinye, ibe edokọbara, wdg.
Bookmark ma ọ bụ ibe edokọbara iji ihe fọdụrụ nke akwụkwọ na-anwụ-ebipụ ụfọdụ butterflies.
Anyị ga-eme mpempe akwụkwọ site na iji akwụkwọ ndị ọzọ na-anwụ anwụ na nke a, ụfọdụ butterflies; ma inwere ike irite uru n’uzo ozo ma mebe akara nke gi
Etu ị ga-esi jikọta ndị Japan iji mee akwụkwọ ndetu nke gị.
Anyị ga-amụta otu esi eme ka ndị Japan nwee ike ịme akwụkwọ ederede nke gị ma jiri ha maka akwụkwọ edetu, akwụkwọ, ọba.
Album njem iji jide foto ezumike
Mụta otu esi eme ọba a ka itinye foto niile nke ezumike kachasị amasị gị ma cheta oge ndị a gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ezinụlọ gị bi.
Ihe ncheta maka baptism ma ọ bụ ịsa ahụ ụmụ ejima ma ọ bụ ejima
Mụta otu esi eme ncheta a zuru oke iji mee ememme baptism ma ọ bụ ịsa ahụ nwa wee nye ndị ọbịa gị nkọwa mara mma.
Super mfe onyinye kaadị maka Nna Day na 5 nkeji
Mụọ otu esi eme kaadị Father'sbọchị Nna a ma ọ bụrụ na ịnweghị oge ịzụta onyinye ọ bụla. Ọ na-ewe oge 5 ma ọ dị oke mma.
Nye ego n'ụzọ mbụ, jiri usoro origami.
Nye ego n'ụzọ mbụ, jiri usoro origami. Taa achọrọ m igosi gị onyinye dị iche, nke mbụ na nke dị mfe ịme
Scrapbooking kaadị album ebe gị ọkacha mmasị
Muta otu esi eme mpempe akwukwo di iche iche iji chekwaa foto gi kachasi nma, odi mfe ma o di nma inye dika onyinye.
3 Echiche iji mepụta ihe ịchọ mma ekeresimesi na ngwaahịa CUPCAKE
N'ime nkuzi a, ewetara m gị echiche 3 iji mepụta ihe ịchọ mma ekeresimesi nke gị nwere ihe dị ọnụ ala dị ka iko cupcake.
Dị mfe Christmas kaadị ka ya na ụmụaka
Mụta otu esi eme ka kaadị ekeresimesi a dị mfe iji ju mmadụ anya ma kelee ha na ụbọchị ndị a na ozi dị mma
Mee N'onwe Gị otu esi eme ka akwụkwọ ndetu mmiri site na mpempe akwụkwọ.
-esi mee ka mmiri dee akwụkwọ site na mpempe akwụkwọ. Mee akwukwo a dika ihe choro gi ma mee ya dika odi gi nma.
Otu esi eme okooko osisi site na akwukwo crepe
Anyị na-egosi gị otu esi eme okooko osisi na akwụkwọ crepe iji nye Valentpo topo nye enyi pụrụ iche, kọwara nzọụkwụ site na nkuzi anyị.
Anyị ga-ahụ otu esi eme mpempe akwụkwọ dị mfe nke ejiri akwụkwọ mee, ka ị nwee ike iji ya mee ka ọ dịrị gị mfe ịgụ.
Taa, anyị ga-ahụ otu esi eme ka ọkọlọtọ eji achọ mma maka nnọkọ na ụzọ dị mfe na ngwa ngwa iji mee yana nsonaazụ mara mma.
Mee N'onwe Gị - Ihe njide kaadị
Mee N'onwe Gị - ihe njide kaadị. Ọ bụ a obere akpa mere nke akwụkwọ ebe ị nwere ike ịchekwa gị kaadị, ịzụta tiketi, tiketi ...
Echiche abụọ maka imepụta nka na teepu washi - Mfe Mee N'onwe Gị
N'ime nkuzi a m ga-ewetara gị echiche abụọ iji rụọ ọrụ aka na teepu washi. Ọ bụ teepu eji achọ mma eji achọ mma yana eserese na agba ya.
N'ime nkuzi a, a na m akuziri gị otu esi eme igbe candy ma ọ bụ igbe swiiti dị mfe ma dịkwa ọnụ ala, zuru oke maka nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụbọchị ọmụmụ, mmiri ozuzo ụmụaka, udo ...
Obi nke okooko osisi maka ụbọchị ịhụnanya - Nzọụkwụ site na nzọụkwụ
N'ime nkuzi a, a na m akuziri gị otu esi eme obi ifuru iji chọọ mma ma ọ bụ nye dị ka onyinye na ụbọchị Valentine ma ọ bụ ụbọchị Valentine. Easy na ọnụ.
Mụta otu esi eme aha ndị a maka igbe onyinye gị ekeresimesi a. Ọ bụ ụzọ mbụ ị ga-esi nye onye ị hụrụ n’anya onyinye pụrụ iche.
Christmas wreath icho mma n'ọnụ ụzọ gị na ọzọ
Mụta otu esi eme ka okooko osisi Krismas a chọọ ụlọ gị mma n'oge a site na iji mpempe akwụkwọ ị hapụrụ na ọrụ ndị ọzọ.
Mee N'onwe Gị otu esi hazie akwụkwọ ndetu
Ọ bụrụ na akwụkwọ ederede na-amasị gị, nkuzi a ga-amasị gị !!!, M ga-egosi gị Mee N'onwe Gị: otu esi hazie akwụkwọ ndetu ka ọ bụrụ ihe masịrị gị.
Akpụkpọ ụkwụ ụmụaka maka ịsa ahụ Baby
Muta otu esi eme onyinye mbu na nwa gi. Otu esi eme akpụkpọ ụkwụ ụmụaka dị ka ihe ncheta.
Akwụkwọ ghosts icho mma gị Halloween ọzọ
Muta otu esi eme mmuo akwukwo ndia inye ulo aka gi ma obu ihe omuma nke Halloween. I nwere ike ime ọtụtụ.
Mkpado mkpado maka akwụkwọ ntanetị. Obi
Mụta otu esi eme aha mmado ma ọ bụ mkpado ndị a maka ọrụ ịdegharị akwụkwọ n'ụdị obi. ha na-ele anya nke ukwuu maka echiche gị.
Otu esi eme ihe nkpuru osisi
N'ime nkuzi a, m na-egosi gị otu esi eme ihe mkpuchi mkpụrụ osisi nke ga-eme ka akụkụ ọ bụla na-enwu gbaa, mana ọ dịkwa mma maka nnọkọ na ụlọ ahịa windo.
Otu esi eme akwa okooko osisi na lace
Y’oburu na ichoro oru oma iji choo ulo gi ma obu ubochi omumu gi nma, muta otu esi eme okooko osisi ndi eji aka ha eme.
Etu esi achota agendas na Washi Tape
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi ihe omume gị ma ọ bụ mee onyinye mbụ dị oke mkpa, jiri Washi Tape, ebe a anyị ga-egosi gị otu esi eji agamịghe Washi chọọ mma.
Etu esi eme akwukwo foto scrapbook
Chekwaa foto kachasị amasị gị na ọmarịcha foto foto teknụzụ a anyị gosipụtara gị site na nzọụkwụ. Nkọwa mara mma iji nye dị ka onyinye.
Otu esi eme igbe candy maka ndi ozo na ememe
N'ime nkuzi a, ị ga - amụta otu esi emepụta igbe dị ụtọ ma ọ bụ chọkọletị zuru oke iji nye ndị ọbịa gị na nnọkọ ma ọ bụ mmemme. Na template gụnyere.
Otu esi eme efere Newsprint
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi emepụta ọkwá ọhụụ ọhụụ na ọnụ ala. Ha nwere ezigbo nsonaazụ dị mma, ha na-eguzogide ọgwụ ma dịkwa ọnụ ala.
Otu esi eme kaadiboodu na Eva Gum okooko osisi
Ọ bụrụ na okooko osisi masịrị gị, ị ga-ahụ nzọụkwụ a n'anya, m ga-egosi gị otu esi eme okooko kaadiboodu na Eva Gum, iji chọọ ụlọ gị mma.
OTOW E SILE Gbanwee Ntuziaka
N'ime nka a, anyị ga-ahụ otu esi achọ akwụkwọ ndozi n'ụzọ dị mfe, na-agbanwe ụdị ndị bụ isi iji nye ya ụdị nke ọzọ.
Otu esi eme ibe edokwubara
Mụta otu esi eme ndokwa ibe, echiche onyinye magburu onwe ya ma ọ bụ naanị iji chọọ akwụkwọ kachasị amasị gị. Echefula nzọụkwụ site na nzọụkwụ.
Otu esi eme cones craft
Iji mee ka oriri na ọ aụ aụ gị nwee ihe ịga nke ọma, m ga-egosi gị otu esi eme cones akwụkwọ nka iji nye dị ka ihe ncheta n'ụdị mmemme ọ bụla.
Nkwakọ ngwaahịa na envelopu
N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ etu esi eji ngwugwu envelopu eme ihe n'ụzọ dị ụtọ na nke izizi na n'oge dị mkpirikpi.
Otu esi eme kaadi na Washi Tape
Taa, anyị ga-egosi gị otu esi eji Washi Tape eme kaadi. Ọ dị mma mgbe niile ịnye onyinye nke aka gị, egbula usoro site na nzọụkwụ.
-Esi mee ka a tic-tac-ụkwụ dị mfe ma dị ọnụ ala
N'ime nkuzi a, ana m egosi gị otu esi emepụta mbadamba taịlị maka otu egwuregwu egwuregwu kachasị ewu ewu, tic-tac-toe. Chepụta ya dịka ọ kachasị amasị gị.
Akpa ncheta maka ụbọchị ọmụmụ
Anyị na-ekerịta nkuzi iji mee akpa ncheta maka ụbọchị ọmụmụ, yana ebu metụtara, maka ụbọchị ọmụmụ mbụ nke dịkwa mfe ma dịkwa ọnụ ala.
Achọ mma akwụkwọ bọọlụ maka ndị ọzọ
Site na nkuzi nkuzi a nke a, ị ga-amụta otu esi emepụta bọọlụ eji achọ mma iji kpọọ ụdị oriri ma ọ bụ oriri ọ bụla.
Ibe akwukwo ibe edokwubara
Na nka nke taa, anyi gha hu ka esi eme akara edemede di nma, na-eji kaadi abuo.
Kaadị ụbọchị nne
Muta otu esi eme kaadi nke oma nke nne.
Otu esi emechi onyinye maka ubochi nne
Muta otu esi eme ihe nkpuchi mara mma na nke mbu maka ubochi ndi nne n’ile anya, n’uzo di mfe ma bawanye ike.
Otu esi eme ihe ncheta swiiti
Otu esi eme ihe ncheta yiri swiiti, nke izizi, nke dị mma maka ụbọchị ọmụmụ ụmụaka.
Akwụkwọ mmado na mkpado
Mụta otu esi eme aha mmado ndị a ma ọ bụ mkpado ederede. Ha dị egwu !!!
Otu esi eme nkata Ista
Otu esi eme nkata onyinye maka Ista, jiri kaadiboodu, adighi ego ma di mfe.
Otu esi eme kpuchie kpakpando
Otu esi eme ka okpu kpakpando icho mma nke ime umuaka, ebu ndi akwadoro ibiputa
Anyị na-achọ akwụkwọ mpịakọta anyị mma
N'ime ọrụ taa anyị na-eme akwụkwọ mpịachi anyị, n'ụzọ na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ịnwa ịme ya na ụmụaka, ha ga-ahụ ya n'anya.
Otu esi eme ncheta iji nye ndi di ime
Nzọụkwụ site na iji mee ka ihe ncheta mbụ ị na-enye ndị nne na-elekọta.
Esi mee ka ụbọchị Valentine kechie
Ọ bụrụ na ị maraworị ihe ị ga-enye n'ụbọchị Valentine, ugbu a iji chee banyere nkwakọ ngwaahịa ahụ, anyị ga-amụta otu esi eme nkwakọ ngwaahịa n'ụzọ dị mfe.
Original inepo kaadị «m hụrụ gị n'anya»
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị mee kaadị dị ọsịsọ ma maa mma maka emume pụrụ iche dịka ụbọchị Valentine, a na m ewepụta ya na nke mbụ.
N'ime ọrụ taa anyị ga-ahụ etu esi hazie ibe edokọbara ma ọ bụ akara peeji.
Akwụkwọ obi chọọ mgbidi ahụ mma
Nkeji edemede banyere otu esi eme ka obi akwukwo ichota mgbidi. Ọrụ dị mfe ma na-atọ ụtọ ịkọrọ ụmụaka dị n'ụlọ.
Njikọ ndị Japan
N'onwe gị edemede banyere otu esi eme ka njikọ Japan.
Akwụkwọ Crepe na eriri ifuru okpueze
N'onwe Gị isiokwu na-egosi otú ime a kpam kpam N'onwe Gị ifuru okpueze na zuru okè na-eyi a mmiri n'oge okpomọkụ.
Hippie tiara ya na okooko osisi
Hippie tiara jiri okooko osisi ejiri eme akwukwo ejiri mee ya, ezigbo ngwa maka ndi ozo ma di mfe ime ma nweta ihe
Akwụkwọ daisies maka oge opupu ihe ubi
Nkuzi banyere otu esi eme akwukwo daisies na akwukwo crepe na bọtịnụ. You nwere ike iji ha icho mma mmiri ma ọ bụ n'oge okpomọkụ ọzọ.
Garland maka ndị ọzọ na akwụkwọ crepe
Ezigbo ihe Mee N'onwe Gị maka nnọkọ. N'ime nkuzi a, anyị ga-amụta otu esi eji okpu na-acha uhie uhie na okpu. Zuru okè maka nnọkọ oge ikpeazụ.
Decoupage, otu esi icho mma akwukwo na usoro a
Decoupage, usoro eji eme ọtụtụ ihe ma dịkwa mfe iji. Ngwongwo, ite, ite, kandụl na ihe niile anyị chọrọ iji teknụzụ a chọọ.
Mkpado onyinye mbu
Mee N'onwe Gị otu esi eme ụdị aha kawaii dị mfe iji soro onyinye.
Akwụkwọ edemede: Kaadị ekele na usoro a
Akwụkwọ ntanetị, usoro ejiji. Taa, anyị na-egosi gị nkuzi a ọmarịcha kaadị ekele na usoro Scrapbooking. Dị mfe ma mara mma.
Kechie onyinye n'ụdị ifuru
Nkuzi banyere uzo esi kechie onyinye na uzo mbu na nke obi uto. Na nke a, anyị ga-amụta otu esi eme ifuru site na akwụkwọ crepe.
Ihe nkpuchi ihu na teepu washi
N'ime ọrụ nke nkuzi a bi, anyị ga-amụta otu esi eji teepu washi kpuchie ma kpuchie ekwentị mkpanaaka.
Na-akọwapụta akwụkwọ crepe
Arụ ọrụ a raara nye ịnwale aghụghọ aghụghọ nke anyị nwere ike iji mee ihe ma ọ bụ, ọ bụrụ na anyị nwere obi ike karịa, n'afọ niile. Otu esi eme ihe ngosi na akwukwo crepe
Crepe okooko osisi icho mma
Mee N'onwe Gị otu esi eme okooko osisi na crepe ma ọ bụ akwụkwọ crepe iji chọọ mma.
Hipster sitere n'ike mmụọ nsọ otu ihe nkwado
Mee N'onwe Gị ihe na-eme ka ndị ọzọ props. A fun na ike ụzọ liven up a ọzọ iji ihe ndị anyị nwere n'ụlọ.
Akwụkwọ ifuru dị ka ịchọ mma
Mee N'onwe Gị gbasara akwụkwọ oriri na ọ decoụ partyụ akwụkwọ. N'isiokwu a ị ga-ahụ otu echiche iji mee ifuru akwụkwọ akwụkwọ mara mma iji chọọ mma ma tọọ ọnọdụ ahụ
Obere akwukwo nwere mpempe akwukwo
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme obere akwụkwọ nwere mpempe akwụkwọ dị ka igodo ma ọ bụ nchịkọta nke miniatures. Ihe omume puru iche nke ya.
Frankenstein ogologo anụ nwere baloon na akwụkwọ akụkọ ọhụrụ
N'isiokwu a anyị na-akụziri gị otu esi eme Frankenstein isi maka Halloween na usoro nke balloon nke ejiri akwụkwọ mposi, gluu na mmiri.
Jiri mkpụrụ osisi FIMO chọọ mma
Mee N'onwe Gị imepụta ihe iji dezie ihe ederede na ihe ntu si FIMO.
Ugu Halloween mere si a magazine
Nkuzi banyere otu esi eme ugu ugu na Halloween site na magazin, pensụl, gluu na teepu akwa.
Bat okpu maka Halloween
Nkuzi banyere otu esi eme ihe mkpuchi site na akwụkwọ eji emegharị, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ maka abalị Halloween, na-eso usoro ole na ole dị mfe.
Mee N'onwe Gị: Onye ngosi ngosi na ihe eji emegharị emegharị
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu ị ga - esi mee nnukwu onye ofufe maka ngosi ahụ. Yabụ na ị gaghị emefu ụdị okpomọkụ ọ bụla ma ọ bụ agovios ọ bụla, ị ga-eme onwe gị ume ọhụrụ n'ụzọ nkịtị.
Okooko osisi Origami icho mma ulo anyi
Otu esi eme okooko osisi origami di mfe icho mma nkuku nke ulo anyi site na ihe mbu, mara mma ma di iche.
Mee N'onwe Gị: Okooko Osisi Silk maka Ihe ngosi
N'isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eme okooko osisi ndị mara mma maka Ngosipụta nke eji akwụkwọ anụ ahụ mee, maka ndị na-adịghị eji ejiji ka gypsy.
DIY: Fun Akwụkwọ ibe edokọbara
Diy otu esi eji akwukwo, gluu na akara aka mee edokarabara ntaneti.
DIY: Otu esi eji igwe eji eme ihe eji eme ihe
Mee N'onwe Gị otu esi eme mkpanaka na kreeni akwụkwọ iji chọọ akụkụ ọ bụla nke ụlọ anyị mma.
Otu esi eme kreenu origami
Mee N'onwe Gị nkọwa nkọwa nke otu iji mee kreeni origami.
Mee N'onwe Gị: Okooko Osisi inepo na Akwụkwọ Napkins
N’isiokwu a, anyị gosiri gị otu esi eji okooko osisi mee ọmarịcha okooko osisi, ọkachasị ụbọchị Valentine. A nnọọ peculiar na ndị mara mma zuru ezu.
Obi etiti maka ụbọchị ịhụnanya
N’isiokwu a anyị na-akuziri gị otu esi eme ọmarịcha eserese iji nwee ike ịse foto nke onye gị na ya bi ma ọ bụ gị abụọ, yabụ ọ ga-abụ onyinye mbụ na nke mara mma.
Ji achọ ehi na akwụkwọ pulp
N’isiokwu a, anyị gosiri gị ụfọdụ ehi na-atọ ọchị iji chọọ ime ụlọ nwa gị ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke ụlọ ahụ mma.
Oriọna ya na ebu ebu
N’isiokwu a, anyị ga - egosi gị otu esi eme oriọna dị n’elu nke eji achọ ụlọ akwụkwọ mma mma.
Mepee okooko osisi
N’isiokwu a, anyị na-akuziri gị ime ka okooko osisi mepere emepe n’ụzọ dị mfe, iji chọọ ụdị oriri ọ bụla maka ezumike a.
Mfe Roses na akwụkwọ, ọmarịcha ịchọ mma
N’isiokwu a anyị na-enye gị echiche iji chọọ onyinye mma, Roses ndị a dị mfe emere naanị akwụkwọ iberibe akwụkwọ ma ọ bụ kaadiboodu.
Otu esi eme ka ndi na-akwado akwukwo n'oru oru aka.
Atọ dị iche iche na taịl nile
Mụta icho mma na decoupage: otu esi amalite usoro a
Ihe ịchọ mma Parisian maka onyinye
Etu esi icho mma ma obu edozi onyinye nke ihe ndi Paris
Akwụkwọ obi icho mma
-esi mee ka akwụkwọ obi icho mma